Ogologo kilomita ole ka ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe dị na Bentonville Arkansas? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Bentonville ar ugwu biking - ajụjụ a na-ajụkarị
Bentonville ar ugwu biking - ajụjụ a na-ajụkarị
Ogologo kilomita ole ka ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe dị na Bentonville Arkansas?
Dị ka ị nụworo, e mere IMBA World Summit na northwest Arkansas afọ a - nke bụ nnukwu nnukwu ọrụ. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kachasị akwado ịgba ịnyịnya ígwè, ka emechara, yabụ ndị ọbịa na-abụkarị ebe nlereanya. Arkansas na-efe n'okpuru radar, jiri nwayọ na-ewu ma na-edozi akụrụngwa ya.
Na weebụsaịtị ha: Ugwu Ugwu. N’ọdụ ụgbọ elu: Mountain Biking. O doro anya ịhụ na ha niile nọ.
Ngalaba Parks & Tourism nke Arkansas na-akwado njem m n'ụzọ zuru ezu. Nke a nwere ike imetụta ọkwa m, mana n'ezoghị ọnụ, ọ na-ekwu ihe banyere ntinye onwe ha n'ịgba ọgba tum tum. Kama ilele ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe dị ka ebe mara mma, Bentonville etinyela Razorback Regional Greenway, na-ejikọ Bentonvillenorth na Fayetteville South na mgbada.
Ha dị mfe iru site na ebe ọ bụla na obodo. Ọtụtụ ụzọ ụkwụ ejikọrọ bụ akụkụ nke Sla Sla Pen, usoro Irode mbụ mgbe ọ rutere na Bentonville. Site n’ọdụ ụgbọ elu m gara na ụlọ ahịa ịnyịnya ígwè Phat Taya.
Naanị nkeji ole na ole eburu igwe mgbazinye m, m na-arịgo agwọ na Sla Sla Pen. Akụkụ m kachasị amasị m nke Pen Sla Sla nwere ọtụtụ atụmatụ mmadụ mere ka ọfụma, ụkwụ, na agba agba. Ebe ọ bụ na sistemụ na-enye netwọkụ nke ụzọ ụkwụ dị mkpirikpi n'usoro, ịnyịnya gị nwere ike ịdị ogologo ma ọ bụ dị mkpụmkpụ dịka ịchọrọ.
Ebe dị mfe ịnweta na-amalite site na nrịgo nwayọ nwayọ nke na-eduga n'ịgba ọsọ na-adọrọ adọrọ ị nwere ike ịrịgo elu wee kụọ ya ọzọ. Y’oburu n’icho ihe ozo di nkpa, ihe eji agbapu oku na-enye gi ihe kacha mma. Mụ na ụfọdụ ndị enyi m jidere na Fraịdee ịkwọ ụgbọala ebe a ma ọ bụ n'ụzọ ziri ezi n'ọnụ ụzọ ha.
Ọ bụrụ na ị dị ka m, ị ga-enwe ekele ịkwọ ụgbọala ogologo gaa na etiti obodo mgbe ịnyịnya gị. N'ezie, ịkwesighi iri hambuger n'etiti sandwiches cheese abụọ eghere eghe, mana ị nwere ike, ehee. Njem gaa northwest Arkansas nwere ike iji ọrụ n'aka ọtụtụ ụbọchị na-enweghị ụgbọ ala mgbazinye ma ọ bụ mgbagharị.
Na Bentonville ị dị nso ọdụ ụgbọ elu na n'etiti ya. Lọ ahịa igwe kwụ otu ebe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị na-aga njem na obodo dị nso na ị ga-ahụ ụlọ ọrụ ọha na eze na-akpọ RailYard, ọ bụrụ na m tolitere na ama egwuregwu dị ka nke a, ebe m na-enwe ahụmịhe nke obodo mepere emepe, njem kachasị echefu bụ ndị ị furu efu na Osisi. Banye n’Ugwu Ozark, ị gha ahụ 5 IMBA Epic Rides.
Zọ ụkwụ dị na UpperBuffalo na-enye ezigbo ahụmịhe azụ. Ọ kachasị mma ịkwadebe ma weta onye na-agba ịnyịnya dị ka Alex ma m ghọtara. Ọdịdị na-ahụkarị dị ka taya dara ada ma ọ bụ mmerụ ahụ nwere ike ịdị njọ nke ukwuu mgbe ịnọpụrụ iche na mmepeanya.
Alex were iwe n'ezie banyere iwelata njem ya mana ọ siri ọnwụ ka m gafere ebe ọ bụla ịnara ekwentị. N'agbanyeghị mkpebi a na-enyo enyo, enwetara m ụfọdụ ndị enyi ngwa ngwa. Agaghị m atụle ịnya ụgbọ ịnyịnya ibu kpamkpam n'enweghị nsogbu.
Bentonville dị na ndepụta m na-aga eleta ọzọ. Kwesịrị ịlaghachi maka njem dị ogologo, soro ndị obodo nọrịa obere oge, ma gbago ụzọ ụkwụ niile nke obodo ahụ n'ozuzu ha. N'ezie, m tụrụ anya na Arkansas ga-enwe nnukwu ụzọ ụkwụ na ebe a na-agba ịnyịnya igwe ugwu, ka emechara, IMBA họpụtara ha ka ha nọrọ na Summit World Summit niile akụrụngwa gburugburu ma jikọta ụzọ ụkwụ, atụghị m anya na ọtụtụ ihe ga-abịa. site na nke ahụ Dịka ị nwere ike ịnụ n'ime izu ole na ole gara aga, Arkansas bụ hotspot ọhụrụ.
Ya mere, rue mgbe nleta m ọzọ, daalụ Arkansas maka ịbụ ezigbo ọbịa! Niile ndị debanyere aha m ahụla, daalụ maka ịnọnyere m na-anya ụgbọala, aga m ahụ gị oge ọzọ.
Ebee ka m nwere ike gba ịnyịnya igwe kwụ otu ebe na Bentonville AR?
BentonvilleParks na Recreation dị mpako inye karịa 28Puku kwuru pukunke mmeriụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe.
Bentonville AR nwere ugwu?
Bentonville Mountain BikeIlszọ ụkwụ
Ogbugbu Pen ♡zọ ughterBentonville,Arkansas. Ekwentị | 15.0 mi.
Mmiri na-agba ume ♡ Bella Vista,Arkansas. Ekwentị | 7.0 mi.
Azu 40 ♡ Bella Vista,Arkansas. Ekwentị | 40.0 mi.
Olu akwaIgwe UgwuChebe ♡Bentonville,Arkansas.
Chicken Oké Nkume ♡ Springdale,Arkansas.
You na-eche echiche ịkwaga Bentonville ma na-eche ma ọ bụ ebe kwesịrị gị? N'isiokwu a, aga m akọwa ụfọdụ uru na ọghọm nke ịkwaga Bentonville. Ka anyi lee ma enwere m ike ime ka gi kwenye na eric eBy na curtis realtygroup na ihe ndi ozo. Na ọwa a anyị na-ekwu maka ihe niile dị na northkanskan Arkansas.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere mmasị, pịa bọtịnụ ịdenye aha nke dị oke mma, yabụ ihe mbụ ndị mmadụ hụrụ n'anya banyere ibi na Bentonville bụ Schoolslọ Akwụkwọ Bentonville nwere ụlọ akwụkwọ kachasị elu na steeti Bentonville nwere akwụkwọ nyocha 13 sitere na Ngalaba Mmụta Arkansas nke Arkansas nwetara kaadị ahụ karịrị mpaghara ọ bụla ọzọ na Arkansas na Niche.com na-ekwu na entlọ Akwụkwọ Bentonville bụ mpaghara ụlọ akwụkwọ kacha mma na Arkansas dabere na ihe ogo gụnyere ogo ule steeti, akara ngụsị akwụkwọ nke kọleji, sa-tand ac-tscores quality nkụzi, na More The next ihe ndi mmadu huru n'anya banyere ibi na Bentonville bu ihe ndi n’eme na Bentonville, enwere otutu ihe ndi n’eme na gburugburu Bentonville Square, ha na akwado ndi oru ugbo n’oge opupu ihe ubi, otutu egwu di ndu di na Crystal Bridges Museum of Americanarts Night Out na ndị ọkà okwu a ma ama na-atụkwa anya ya Ndị bi Bentonville na-atụkwa anya ịbịara gị ọtụtụ nzukọ gala-okike Egwuregwu ndị a na-eme n'egwuregwu asọmpi na-eme ụdị ihe niile n'afọ niileOtu ihe ọzọ ndị mmadụ hụrụ n'anya banyere ibi na Bentonville bụ ịnọ nso na-eme ihe n'ezi maka ezinụlọ niile Bentonville emeela ka okpueze ọgba tum tum ugwu ugwu nke ụwa nwere ihe karịrị 130 kilomita nke ụzọ ụkwụ maka ndị na-agba ịnyịnya. nke ọkwa nkà niile nwere ohere ịnweta kilomita 250 ọzọ site na Theozark Trail System Bentonville dị ka ebe a na-egwu mmiri na-agba ịnyịnya ígwè na ị nwere ike ịmị oge anọ niile nke afọ Ọzọkwa n'ụlọ 16 ogige ntụrụndụ mara mma, gụnyere Orchard, ebe ebe a na-eme ihe ọkụkụ nke July 4 na summer concerts na-ẹkenịmde, na Lawrence Plaza, nke na-egosi na ogige nke mbụ Friday nkiri na odomo ka a ikwommiri na ọkụ ọnwa na otu na oyi oge Ice rink. Ugbu a, anyị na-ekwu maka ọdịda nke ibi na Bentonville, nnukwu conis bụ n'ezie okporo ụzọ bentonville bụ obere obodo nke karịrị nanị 50,000 mana ebe ọ bụ na walmart nọ na bentonville na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa na ndị na-arụ ọrụ na walmart nwekwara ụlọ ọrụ ebe a, n'okporo ámá ahụ jupụtara na Monday ruo Friday n'etiti ihe dịka 7:30 nke ụtụtụ na 6:00 mgbede njem na-aga site na obodo ndị gbara ya gburugburu na ogige ndị ọzọ dị n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ Arkansas nwere ike ịdị ntakịrị mgbe ị na-anya ma ọ bụ site na Bentonville n'ụtụtụ ma ọ bụ n'ehihie ị si n'otu nnukwu obodo metro ma nọrọ ọdụ n'okporo ụzọ maka awa ole na ole kwa ụbọchị.
Enwere m ike ịchị ọchị na mkpesa anyị banyere okporo ụzọ ebe a, mana ka m gwa gị agha ebe a na northwest arkansas na okporo ụzọ bụ n'ezie ihe na-eduga m na ndụ m ọzọ na bentonville ọnụ ọgụgụ mmadụ bentonville na-agbawa na ntanetị ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ, enweghị nnukwu ụlọ maka ụlọ ọhụrụ ma ọ bụ azụmaahịa a ga-ewu yana imirikiti ụlọ ndị dị ugbu a arụgoro ọnụ. Ọ bụrụ n’ịchọghị ka ndị agbata obi gị nọrọ gị nso, ikekwe Bentonville abụghị ebe kachasị mma ibi na northwest Arkansas. Uzo ozo di na Bentonville bu na ugwo ulo na Bentonville di elu karia otutu obodo ndi ozo di na northwest Arkansas n'ihi ochicho nke otutu ndi mmadu bi na nso oru, dika Bentonville bu ebe otutu ulo oru di na aho 2019.
Onu ulo okpukpu ato, bat abuo, ulo 1,700 nke nwere ukwu na Bentonville ga eri gi ihe dika 225,000. Icho ebe obibi di ara. Yabụ ọ bụrụ n 'ị na-elele ọnụego ọnụego ahụ, ị ​​ga-ahụta onwe gị n'ọtụtụ ọnọdụ ịgba ọnụ wee nwee ike ido onwe gị n'okpuru gị.
Ọnụ ego mgbazinye Bentonville dịkwa elu karịa ọtụtụ mpaghara ebe ugwu ọdịda anyanwụ Arkansas Banye biya ma ọ bụ mmanya ma ọ bụ mmanya na-aba na Sọnde, nzọ kacha mma nwere ike ịkwọga ihe dị ka nkeji 20 gaa na Missouri ma ị nwere ike ịzụta mmanya na-aba n'anya ebe ahụ na Sọnde, mana ọ bụrụ na ị nọ na Bentonville ma chọọ ị drinkụ na Sọnde ozi ọma dị na ebe ahụ? Ogwe na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na-emeghe iji jeere gị ozi, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ngwugwu dị ọnụ ala, ịmara na ị gaghị enweta mkpọ isii Bud Bud ma ọ bụ ihe dị na ụlọ ahịa Bentonville ma ọ bụ ọdụ mmanụ na Sọnde bụ nlele, ma ịkwaga Bentonville dị gị mma. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ịkwaga Bentonville, biko kpọtụrụ m na aski'm eric eby na curtis realtygroup na homequest realty, echefula ịpị bọtịnụ ịdenye aha maka ozi ndị ọzọ gbasara Bentonville na obodo ndị ọzọ dị n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ arkansas . ị nwekwara ike lelee ụfọdụ ederede m ndị ọzọ na www.naturallynwa.com ekele maka ikiri
Kedu isi obodo igwe kwụ otu ebe n’elu ugwu?
Ọ na-amalite site na mbara ala nke NorthwestArkansas. OzarkUgwuUgwu, ndagwurugwu na bluffs ndị a wapụtara site na nkume nzu nke oge ochie kere ebe egwuregwu zuru okeugwuigwe kwụ otu ebe.
Ndị na-eme akwa akwa bụ ụdị nke na-adọrọ mmasị. Highwheelers bụ ihe dịka teknụzụ a na-atọ ụtọ, nke ụmụ okorobịa na-egwu egwuregwu na-agbakarị, yana nnukwu igwe kwụ otu ebe, ị nwere ike ịgba ọsọ ọsọ. E nwere akụkọ banyere omume ebe ana-ejikọ pedal ozugbo mgbe ha malitere ịgbada agbada na wiilị ụkwụ ihu yana ọsọ ọsọ dị ka wiil nwere ike ịgbagharị, pedals nwere ike ịgba ọsọ dị ka ngwa ngwa yana mgbe ha gbadara ma gaa ngwa ngwa ọ ga-esi ike idobe ụkwụ gị ebe ahụ na ya mere ụfọdụ ụmụ okorobịa ga-akụtu ha ụkwụ n'elu aka ha nwere ike ịwụpụ igwe kwụ otu ebe na mmetụta ka ha wee ghara ịdọkọ.
Typesdị igwe kwụ otu ebe anyị na-agba taa, ihe dị ka nke a mgbe ihe mepụtara ihe a bịara mara dịka igwe nchekwa dị ka ọ dị mma karịa. Tupu e mepụta igwe kwụ otu ebe n’elu ugwu, enwere ọgba tum tum na mbido afọ ndị 1970. Ọtụtụ ndị mmadụ malitere ịhụ igwe kwụ otu ebe dị ka ụzọ nwere ike isi nwee ike ịgagharị, ọkachasị nyere nchegbu gburugburu ebe obibi.
M gbara ajụjụ ọnụ banyere ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya mbụ na-agba ịnyịnya ma na-agakwa ọtụtụ, nke dị ezigbo mkpa. Amụtara m ọtụtụ ihe mgbe m na-anya ụgbọala ka m mụtara mgbe m nọ ọdụ na-agwa ha okwu. Ugwu Ugwu Dị Ka Anyị Si Mara Ya Taa Ọ malitere na Marin County, n'ebe ugwu nke San Francisco.
Ndị bidoro ya bụ ndị bidoro njem njem igwe kwụ otu ebe na ihe ha mere bụ nke ochie WWII Schwinn igwe kwụ otu ebe na ịnyịnya ụgbọala pikọp gaa elu ugwu ahụ. Tamalpais wee gbaa ọsọ dị ka o kwere mee n'okporo ụzọ na-adịghị ọcha n'okpuru ugwu a wee gbadaa n'ala. A na-agbaji akụkụ ụfọdụ mgbe ha na-agba ịnyịnya, n'ihi ya, ha mụtara nke ọma na ụdị ụlọ ọrụ a nwere ike ịgbaji karịa ụdị hub a ọzọ, yabụ anyị niile ga-anwa ịnwe ebe dị mma.
trek na-ere ahia na nso m
Na isi, ọ bụ usoro ntụgharị ebe ha mechara chọta akụkụ kachasị mma iji tinye igwe kwụ otu ebe. Ihe na-adọrọ mmasị banyere igwe kwụ otu ebe a bụ na ọ gara njem dị ukwuu iji kwuo na e wuru etiti ahụ na Marin County mana mgbe ahụ anyị nwetara Brooks sadulu si UK, anyị nwetara derailleur si Suntour na Japan, anyị nwetara TA crankset si France Anyị nwere oche oche site na justtali iji mepụta otu igwe kwụ otu ebe a. Ndị ọgba tum tum bidoro nwewe ọgba aghara karịa ndị njem na ndị na-agba ịnyịnya na Marin.
Nke a mechara mee ka ọtụtụ ụzọ egwu ugwu dị n'otu ugwu dị na Marin County mechie, akụkụ ndị ọzọ dị na mpaghara ahụ rụkwara ụzọ nke aka ha ka ndị mmadụ wee wuo ụzọ ịtụnanya dị egwu nke ejiri obi ụtọ wuru gburugburu ihe akpọrọ ya flow- Mepụta ahụmịhe. Maka onye na-agba ịnyịnya ugwu a zụrụ azụ, ụzọ ụkwụ na-aghọ akara nke na-agwa gị ebe igwe kwụ otu ebe kwesịrị ịga. Ahụmịhe ndị a niile bụcha mmekọrịta; Gary Fisher maara Onye Nwere Obi Nwụrụ Anwụ n'ihi na ọ ga-ezute ha mgbe ha na-agba ịnyịnya ígwè na Tour Del Mar.
Ọ bụ ma ịgba ọsọ ịnyịnya na-agba ọsọ na ememme Rock folk. Echere m taa, olee mgbe ị ga-atụ anya ka otu egwu dịka nke a? Onye Nwere Obi Deadtọ Nwụrụ n’egwuregwu ịgba ịnyịnya ígwè? Ndị ahụ abụghị ụdị njikọ ị ga - eme taa, mana n'oge ahụ na ebe a nwere ezi uche n'ihi na a na - ele igwe kwụ otu ebe na ebe egwu dị ka ụdị ụdị ihe ga - enyere ụwa aka ebe anyị chọrọ ka ọ dịrị
Ọ Bentonville AR dị mma?
Mpụ mpụ naBentonville
Bentonvilleso n’etiti ndị kasị nwee nchebe na steetiArkansas, na ala na mpụ ime ihe ike. Ebe E Si Nweta maka nke a bụ n'ụzọ dị ukwuu n'ihiBentonville simagburu onwe ndị mmanye iwu obodo, nke bụ ukwuu irè idebe n'okporo ámá nkeBentonville mmana ụda.
Bentonville AR ọ bụ ezigbo ebe obibi?
Bentonvilledị na Benton County ma bụrụ otu n'imeebe kachasị mma iji birin'imeArkansas.Ibin'imeBentonvillena-enye ndị bi obere ụlọ na-enwe mmetụta nke ime obodo na ọtụtụ ndị bi nwere ụlọ ha. NaBentonvilleenwere ọtụtụ ogige ntụrụndụ. Ọtụtụ ezinụlọ na-eto eto ọkachamaradịrị ndụn'imeBentonvillena ndị bi na-achọkarị mgbanwe.
Olee ihe ize ndụ dị n’ịgba ịnyịnya n’elu ugwu?
Bikgba igwe n’elu ugwubụ ụzọ dị mma eji emega ahụ mgbe ị na-apụ n'èzí iji nwee ọ theụ nlegharị anya - mana ọ nweghị ọghọm. Ọkarịọgba tum tummmerụ ahụ gụnyere ọnya, scrapes, ọkpụkpụ gbajiri agbaji na nkwonkwo aka, ”ka dibịa dibịa egwuregwu Stuart Willick, MD na-ekwu. “Nnukwu mmerụ ahụ nwekwara ike ịda.07.21.2016
Kedu steeti nwere ọgba tum tum kacha mma?
Onye mmeri: Utah
Maka m, Utah bụ onye mmeri doro anya ma a bịa nakacha mma bikena United States. E nwere ọtụtụ ịgba ịnyịnya ebe ahụ na ọtụtụ ụzọ dị iche iche dị iche iche.Igwe kwụ otu ebeOgige: Na mgbakwunye na kilomita na kilomita nke pedaly singletrack, Utah nwekwararịọisii ebuli-oziigwe kwụ otu ebeogige ntụrụndụ gburugburusteeti.11.11.2020
Bentonville AR ọmarịcha ebe obibi?
Bentonvilledị na Benton County ma bụrụ otu n'ime ihe kacha mmaebe obibin'imeArkansas.Ibin'imeBentonvillena-enye ndị bi obere ụlọ na-enwe mmetụta nke ime obodo na ọtụtụ ndị bi nwere ụlọ ha. NaBentonvilleenwere ọtụtụ ogige ntụrụndụ. Ọtụtụ ezinụlọ na-eto eto ọkachamaradịrị ndụn'imeBentonvillena ndị bi na-achọkarị mgbanwe.
Gịnị bụ obodo kasị dị ize ndụ na Arkansas?
Little Rock,Arkansas. Iheime ihe ikempụ na Little Rock bụ 1,517 n'ime 100,000 bi na ya. Ọnụ ọgụ mwakpo na nke aobodofọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu ise nke mba ahụ.9 nke 2020bọchị 2020